Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » IQatar Airways ilwa nokushushumbiswa kwezilwane zasendle ngokungemthetho
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Ubugebengu • Izindaba • Abantu • Izindaba zaseQatar • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ukusimama Izindaba • Ezokuvakasha • Transportation • Izindaba Zocingo Lokuhamba
UkuHlola Okungekho Emthethweni Kwezokuhweba Ngezilwane Zasendle (IWT) kwaklanywa yi-International Air Transport Association (IATA), ngokuxhaswa yiROUTES, njengengxenye yohlelo lokuphathwa nokuhlolwa kwemvelo kwe-IEnvA - IATA kwezindiza. Ukuhambisana ne-IWT IEnvA Standards kanye Nemikhuba Enconyelweyo (i-ESARPs) kunika amandla abasayina bezindiza e-United for Wildlife Buckingham Palace Declaration ukukhombisa ukuthi basebenzise Izibophezelo ezifanele ngaphakathi kweSimemezelo.
I-Qatar Airways, eyilungu elisungula i-United for Wildlife Transport Taskforce, isayine iSimemezelo saseBuckingham Palace esidumile ngo-2016.
Isimemezelo saseBuckingham Palace okuhloswe ngaso ukuthatha izinyathelo zangempela ukuvala imizila ebasetshenziswa ngabashushumbisi bezohwebo ezingekho emthethweni zezilwane zasendle, ukuhambisa imikhiqizo yabo.
NgoMeyi 2019, iQatar Airways yaba yinkampani yezindiza yokuqala emhlabeni ukuthola isitifiketi soHlelo Lokuhweba Ngezilwane Zasendle Olungekho Emthethweni (IWT).
I-Qatar Airways ikwandise ukubamba iqhaza kwayo e-USAID ROUTES (Ukunciphisa Amathuba Okuthutha Okungekho Emthethweni Kwezinhlobo Ezisengozini Yokubambisana), kuqinisa ukuzibophezela kwayo ekulweni nokushushumbiswa ngokungemthetho kwezilwane zasendle kanye nemikhiqizo yazo.
Qatar Airways, ilungu elisungula i- I-United for Wildlife Transport Taskforce, wasayina umlando Isimemezelo SeBuckingham Palace ngowezi-2016, kuhloswe ngakho ukuthatha izinyathelo zangempela ukuvala imizila esetshenziswa ngabashushumbisi bezohwebo ezingekho emthethweni zezilwane zasendle, ukuhambisa imikhiqizo yabo. Kamuva ngoMeyi 2017, inkampani yezindiza yaqhubeka nokusayina iMemorandamu Yokuqonda yokuqala ne-ROUTES Partnership. NgoMeyi 2019, iQatar Airways yaba yinkampani yezindiza yokuqala emhlabeni ukuthola isitifiketi soHlelo Lokuhweba Ngezilwane Zasendle Olungekho Emthethweni (IWT). Isitifiketi sokuhlolwa kwe-IWT siqinisekisa ukuthi iQatar Airways inezinqubo, ukuqeqeshwa kwabasebenzi kanye nezivumelwano zokubika ezenza ukushushumbiswa kwemikhiqizo yezilwane zasendle engekho emthethweni kube yinselele kakhulu.
Qatar Airways UMphathi Omkhulu weQembu, uMhlonishwa uMnu u-Akbar Al Baker, uthe: “Ukuhweba ngezilwane zasendle okungekho emthethweni futhi okungagcineki kusongela ukuhlukahluka kwemvelo yethu emhlabeni jikelele, futhi kubeka engcupheni impilo nokuphepha, ikakhulukazi emiphakathini ebhekelelwa. Sithatha izinyathelo zokuphazamisa lokhu kuhweba okungekho emthethweni ukuze kulondolozwe ukuhlukahluka kwemvelo nokuvikela imvelo yethu entekenteke. Sisazibophezele nabanye abaholi bemboni yezindiza ukugcizelela inqubomgomo yethu yokungakubekezeleli nhlobo ukushushumbiswa ngokungemthetho kwezilwane zasendle kanye nemikhiqizo yazo, futhi sijoyina ubuhlakani beROUTES ngokuthi - 'Akuhambi Nathi'. Sizoqhubeka nokusebenza nababambiqhaza bethu ukuqwashisa nokwenza ngcono ukutholakala kwezenzo ezingekho emthethweni zezilwane zasendle ukuvikela lezi zilwane esizazisayo. ”
UMnu. Crawford Allan, uMholi Wokubambisana Kwe-ROUTES, wamukele ubuholi i-Qatar Airways obukhombisile emizamweni yokuvimbela ukushushumbiswa kwezilwane zasendle ethi: “Ngezenzo zayo zokuqwashisa, ukuqeqesha kanye nokushushumbisa izilwane zasendle ngaphakathi kwezinqubomgomo zayo, iQatar Airways ikhombisile ukuzibophezela kwayo Isimemezelo saseBuckingham Palace kanye nasenhlosweni yobambiswano lwe-ROUTES. Ngiyaziqhenya ngokubona ukuthi iQatar Airways iyaqhubeka nale mizamo futhi iba yingxenye yenani lezinkampani ezikhulayo ukusho ukuthi Azihambi Nathi. ”
Ubhadane lwe-COVID-19 lukhombisile ukuthi ubugebengu bezilwane zasendle abuyongozi nje kuphela emvelweni nasekuhlukanisweni kwezinto eziphilayo, kodwa futhi nasempilweni yabantu. Naphezu kokuhamba okunqatshelwe, imibiko yokushaqwa kwezilwane zasendle ngokungemthetho ngonyaka odlule iveze ukuthi abashushumbisi basathatha amathuba abo okushushumbisa izinto ezingekho emthethweni ngohlelo lokuthuthwa komoya. I-Qatar Airways iyabona ukuthi ngokusekelwa ubambiswano lweUSAID ROUTES, imboni yezokuthutha emoyeni ingahamba iye kwiplanethi eluhlaza okubandakanya imvelo kanye nokongiwa kwezilwane zasendle, izingxenye ezibalulekile zomnotho wezilwane zasendle ochumayo kanye nemiphakathi yasendaweni.
Njengomuntu osayine okokuqala isivumelwano seBuckingham Palace Declaration ngoMashi 2016 kanye nelungu elisungula le-United for Wildlife Transport Taskforce, Qatar Airways inenqubomgomo yokungakubekezeleli nhlobo ukuthuthwa kwezilwane zasendle ezingekho emthethweni nemikhiqizo yazo. I-Qatar Airways Cargo yethule isahluko sesibili sohlelo lwayo lokusimamisa i-WeQare: Phinda wakhe iPlanet ekuqaleni konyaka, igxile ekuthutheni izilwane zasendle zibuyele endaweni yazo yemvelo, mahhala. Isinyathelo sabathwali bezimpahla sokulondoloza izilwane zasendle kanye nokuvuselela kabusha iplanethi sihambisana nokuzibophezela kwenkampani yezindiza ukulwa nokushushumbiswa kwezilwane zasendle kanye nokuhweba ngokungemthetho kwezilwane zasendle ngaleyo ndlela kuvikelwe imvelo kanye nomhlaba.